1220mm PC PE PP lavaka taratasy fanaovana milina - China Qingdao Hegu Wood-Plastic
PC / PE / PP Hollow Grid Extrusion Plate-dalana, PP milina fanaovana taratasy poakaty, PP kambana rindrina milina fanaovana taratasy, PP fonosana boaty pamokarana, PP corrugatd S ...
Delivery Port: Qingdao Port, Sina
Product ara-nofo: PP PE PC ara-nofo
Product sakany: 1220mm
Product hateviny: 2-8mm
Power fanjifàna: 200KW
PC / PE / PP Hollow Grid Extrusion Plate-dalana, PP milina fanaovana taratasy poakaty , PP kambana rindrina milina fanaovana taratasy, PP fonosana boaty pamokarana, PP corrugatd taratasy fanaovana milina
Ity taratasy hollow PP famokarana mahatsapa tsipika mitohy famokarana ny PC / PE / PP poakaty Grid lovia, izay azo ampiharina ny fanorenana fandravahana, dokam-barotra collocation, sy ny feon'ny insulation ny lalambe ary koa ny fonosana. PE / PP lavaka Grid takela dia mety tsara mahasolo ny taratasy fanaovana efajoro eo amin'ny fonosana boaty. Izany no mampiavaka ny fahazavana lanjan'ny, hamafiny avo, tohodrano-porofo, ary mpanohitra ny harafesiny. Ny sakan'ny ny vokatra dia 1220-2100 mm, ary ny hateviny dia 2 MG-12 mm.
Machine sary for PP lavaka taratasy extrusion tsipika:
1, Material mampifangaro Silo ho an'ny PP lavaka milina fanaovana taratasy: izany no ampiasaina amin'ny PP mampifangaro zavatra amin'ny famenoana masterbatch sy ny loko masterbatch
2, Extruder for PP lavaka milina fanaovana taratasy: The manokana natao visy sy ny mandroso rafitra fifehezana palatalization hahazoana antoka tsara, avo sy mafy orina extruding Output.
raha te-hampiasa mpanjifa recyle fitaovana, isika ihany koa dia afaka hampitaovana mpiara-extrusion tsipika roa sosona noho ny fanaovana taratasy poakaty PP, anaty sosona afaka mampiasa fitaovana amboarina PP, ary ny sosona ambony afaka mampiasa fitaovana PP vaovao.
3, maty lohany sy bobongolo ny PP lavaka milina fanaovana taratasy: afaka hampitaovana ny ho faty lohany
Screen changer for PP lavaka milina fanaovana taratasy :Quick efijery changer ny hydraulic rafitra miantoka ny fohy ny efijery Mazava ho azy fa miovaova. Double-toerana miaraka amin'ny famehezana manokana rafitra manome antoka milamina fiasan'ny efijery changer.
Bobongolo: bobongolo mandany avo-tsara vy sy firaka Manakenda fitaovana mba hahazoana antoka na dia fanerena ny fahana influent amin'ny lasitra molotra, ary koa ny asa Differential niakatra-midina ampahany antoka na dia hatevin'ny ny lovia.
Vacuum calibrating latabatra ho an'ny PP lavaka milina fanaovana taratasy: fanafanana sy hihena fifanakalozana tontolo haingana ny hafainganam-pandeha eo amin'ny tontolo calibrating Alternate fomba mahomby ary mazàna miaraka amin'ny rafitra vacuum, izay miantoka calibrating marina tsara. Kamban-vacuum rafitra tsy miankina roa subsystems ary ny tsirairay dia fitaovana maromaro mivezivezy raikitra vacuum andalana telo-teboka karazana. Mandritra izany fotoana izany, tsipika tsirairay dia mitondra vacuum fisainan'i vacuum rafitra sy ny rafi-miseho izay mahatsapa sy milamina na dia banga ambaratongam-ambonin'ny lovia.
Tractor for PP lavaka milina fanaovana taratasy : Misy roa traktera. Ny voalohany dia hery avo, avo tahan'ny fampihenana, multi--roller karazana, tsara-hafainganam-pandeha ambany fandidiana, avo vahana sy mahay manovo ny lovia niakatra niala teo amin'ny latabatra calibrating mitovy sy synchronous. Ny faharoa indray dia natao mba hanala ny adin-tsaina, ary ankoatra izany dia fitaovana tamin'ny lelan-fanapahana fitaovana mba hahazoana antoka ny manankery sakany sady mandimandina tapaka ny sisiny.
Stress remover for PP lavaka milina fanaovana taratasy : Ny faritra lehibe mandroso conductive fanafanana fomba tsara dia afaka manala ny adin-tsaina ny lovia sy hanatsara bebe kokoa fahatsoran 'ny lovia.
Nanapaka milina for PP lavaka milina fanaovana taratasy: marina raikitra avy hatrany ny halavany-mandeha ho azy ny fanapahana sy ny fanatanterahana-midina miaraka firaka rafitra vy maranitra vary avo hahatsapa tsara ny fanapahana.
Final vokatra sy ny fampiharana atao amin'ny PP lavaka milina fanaovana taratasy:
Previous: Plastic milina fanodinana tavoahangy PET milina fanodinana
Next: Plastic ny mombamomba milina UPVC amin'ny mombamomba milina
mitafo fanitso Plastic Sheet Making Machine
roa sosona p taratasy milina
PC hollow lamba milina
PC tafo taratasy milina
pe hollow lamba milina
pe tafo taratasy milina
Plastic Box Manao Machine
Plastic Bubble Sheet Ny fanaovantsika Machine
Plastika mitafo fanitso Sheet Machine
Plastic Roof Sheet Ny fanaovantsika Machine
Plastic Sheet Fanisana ny Machine
Plastic Sheet nanapaka Machine Manufacturers
Plastic Sheet sokitra Machine
Plastic Sheet Fitotoana Vary Machine
plastika Sheet Ny fanaovantsika Machine
plastika Sheet Ny fanaovantsika Machine Price
plastika Sheet fanaovana Machine Qingdao
Plastic Sheet koronosy Machine
p mitafo fanitso lamba extrusion tsipika
pp Grid taratasy milina
pp hollow lamba extrusion tsipika
PP milina fanaovana taratasy poakaty
PP hollow lamba orinasa mpamokatra entana milina
pp fonosana boaty milina fanaovana
pp fonosana lamba fanaovana milina
pp pallet taratasy fanaovana milina
P Pe Pc Hollow Grid Sheet Ny fanaovantsika Machine
pp tafo taratasy milina
pp taratasy milina
p kambana rindrina milina fanaovana taratasy
PVC-tahaka vita tamin'ny marbra Sheet Machine
PVC-tahaka vita tamin'ny marbra Sheet Ny fanaovantsika Machine
PVC Roofing Sheets fanaovana milina
PVC Sheet Ny fanaovantsika Machine Price
PP boaty milina fanaovana
1700mm PE PC PP kambana taratasy fanaovana rindrina milina
2100mm PE PP fonosana taratasy pamokarana
2500mm PE PC PP mitafo fanitso taratasy milina
1100mm PP PC PE lavaka milina fanaovana taratasy